किन हुन्छ दम्पतीबीच बारम्बार झगडा ? |
Home जीवनशैली किन हुन्छ दम्पतीबीच बारम्बार झगडा ?
बच्चा जन्माइसकेका दम्पतीबीच झगडाको एउटा कारण बच्चा हुनेगर्छ । बच्चाको निहुँमा पति–पत्नीबीच सानोतिनो मतभेद रहन्छ । बच्चाप्रति दुबैको धारणा र व्यवहार एकनास नहुँदा पनि मनमुटाव हुनेगर्छ । बच्चालाई कसरी हुर्काउने, कसरी पढाउने, के बनाउने, के नबनाउने भन्ने कुरामा पति–पत्नीको बिचार बाझिन्छ ।
यस्ता कुरामा एकमत हुनका लागि उनीहरुको झगडाले एउटा निष्कर्ष भने निकाल्छ । जब पति पत्नीबीच भनाभन हुन्छ, तर्क–वितर्क चल्छ, त्यसले एउटा ठोस निर्णय निकाल्छ । वास्तवमा यही कारण पति–पत्नीमा हुने कतिपय मतान्तर फाइदाजनक हुन्छ ।
खासमा झगडाको ओखती भनेर दिइएको पेय पानी हुन्छ । पानीले झगडा रोक्ने त होइन । तर, पानी मुखमा हालेर बसेपछि बोल्न मिलेन । बोल्न नमिलेपछि झगडा भएन । कथाको सारले भन्छ, चुपचाप बस्नु वा अनावश्यक विवाद नगर्नु नै झगडाको ओखती हो ।- अनलाइनखबर
सेक्सपछि पुरुषहरुले महिलाले भन्दा बढि थकान महशुस गर्छन, किन ?